Mushure meiyo Lockdown: Sei Uchisarudza Zororo Rekunosanganisira?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Mushure meiyo Lockdown: Sei Uchisarudza Zororo Rekunosanganisira?
Kuputsa Kufamba Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvese-zvinosanganisira Resorts - Sandals Royal Barbados
Rimwe zuva iyi COVID-19 coronavirus ichave iri kumashure kwedu, uye kukiyiwa kuchasimudzwa kutenderera pasirese. Kana zvadaro, kufamba kuchave pane kwako runyorwa rwezvinhu zvekuita? Zvingave zvese-zvinosanganisira zororo kuva mhinduro kune nyika yaneta?
Nezororo rinosanganisira zvese, iwe uri kunyatso kumutsiridza ako maseru ehupenyu nekumutsiridza mweya wako. Haufanire kufunga nezvechinhu - kwete kwekuenda kana zvekuhodha… Ingo nakidzwa. Pakati penzvimbo dzepamusoro-soro dzakasanganisira zororo rakadai Sandals Resorts & Mahombekombe. Ivo vane zuva uye vanofara uye havana hanya. Uye kungo tarisa mune imwe nzvimbo, ngatitarisei pazororo rose-rinosanganisira muBarbados.
Barbados inozivikanwa nezvinhu zvakawanda, uye kana iwe ukabvunza yemunharaunda, ivo vangangodaro vakuudze kuti zvimwe zvezvinhu zveBarbados zvinonyanya kuzivikanwa ndeyeRihanna, yeNational Dish Cou Cou uye Flying Fish, uye Crop Over. Zvese zvitatu zviri pakati pezvinhu zvakakosha chitsuwa cheBarbados chinonyanya kuzivikanwa, asi kune zvimwe zvakawanda, senge chokwadi chekuti chitsuwa ichi chinoonekwa senzvimbo yekuberekerwa ramu, uye yaizivikanwa se "Los Barbados." Zvimwe pane izvo gare gare…
Chero zvazvingaitika, kumberi kwezororo reBavan, zvine musoro kudzidza zvese zvaunogona, kuitira kuti paunenge uchishanya, uve nekunzwisisa kuri nani kwekuti nei zvinhu zviri izvo zvavari. Seimwe yeakanakisa emahotera emahotera muCaribbean, ita shuwa yekutora rimwe gungwa chiito uripo, uye zvimwe zvese zviitiko zvinogona kukubatsira iwe kurarama hwakanakisa hupenyu hweCaribbean, kana chete kwemazuva mashoma!
Ko maCaribbean angave asina mahombekombe ayo akanaka sei? Zvishoma zvishoma mesmerizing, asi zvakadaro yakachena paradhiso! Neraki, haufanire kuona mahombekombe-mashoma vibes muBarbados. Muchokwadi, chitsuwa ichi chinozivikanwa nekuve nemamwe emabhichi akasiyana siyana muCaribbean, kwaunogona kuzorora nekuzorora panguva yako yekuzorora, snorkel nehukutu, kana kutora imwe nhabvu yemvura chiito. Edza mahombekombe kumadokero nekumaodzanyemba mahombekombe kuitira mamiriro akadzikama, uye mahombekombe kumahombekombe ekumabvazuva kana iwe uchishuvira kukwira mamwe mafungu. Zvimwe pane izvo muchikamu chinotevera!
Insider muromo: Unoda kuva nemahombekombe asingagumi pamahombekombe? Sandals inopa maresitoreti ese anosanganisira muBarbados, Shangu dzeRoyal Barbados uye Shangu dzeBarbados ese ari maviri ari chaiko pamahombekombe egungwa, kwaunogona kuve wekutanga-dib pane mamwe emahombekombe emahombekombe. Vashanyi veimwe Sandals resort, vanogona kushandisa zvinowanikwapo uye maresitorendi emahotera ese ari maviri!
Iyo surf inonakidza!
ICaribbean iri kuramba ichiwedzera kufarirwa nevanhu vazhinji, uye zviwi zvakaita seBarbados zviri pamberi. Maodzanyemba nekumabvazuva kwemahombekombe echitsuwa ndiko kwaunogona kuwana mafungu makuru, uye kazhinji, kunyangwe makwikwi ekufambisa. Mbudzi kusvika Chikumi ndiyo yakanakisa nguva yekutasva mafungu, uye yekumaodzanyemba mhenderekedzo inowanzo kuve sarudzo yeavo vafambi vanoda kutsvaga nekukurumidza kumaresitorendi uye varaidzo futi. Pedyo neguta reOistins, Freights Bay inzvimbo yakachengetedzwa pamhenderekedzo yekumaodzanyemba iyo vanofarikanya vanofarira nekuda kwemhepo dzayo dzekunze. Branden padyo neBridgetown zvakare inzvimbo yakanaka, yakanakira vafambi veese hunyanzvi mazinga. Iyo Soup Bowl, Bathsheba kumahombekombe ekumabvazuva akawana mukurumbira wayo, sezvakaita Surfing South Point, kumahombekombe ekumaodzanyemba. Batts Rock uye Tropicana kumadokero kwemahombekombe, uye Maycock kuchamhembe kwakadziva kumadokero zvakare akakodzera kutenderera. Kana iwe ukaenda kumahombekombe aya kuti utarise uye kwete kusefa, ipfungwa yakanaka kuunza pamwe pikiniki tswanda kuti unakirwe pazororo rose-rinosanganisira nekambani yakanaka.
Bharabhasi ndiyo nzvimbo yekuzvarwa yeRum
Kana paine paine chitsuwa chingati ndiyo nzvimbo yakatangira rum, iri Barbados. Gomo reGay Distilleries kunyanya, rave kuburitsa ramu kubva muna 1703 muBarbados. Iyo distillery inogadzira yakare rum munyika. Mhiri kwechitsuwa ichi, kune anopfuura chiuru nemazana mashanu ezvitoro zverum, uye mamwe ma distilleries, anosanganisira Foursquare Distilleries uye St Nicholas Abbey; imba yekudyara, mamuseum uye rum distillery. Kunyangwe kana usati watove neanofarira rum musanganiswa, mikana iwe unowana iri nani muBarbados.
Barbados yaimbova yeBritish asi ikozvino nyika yakazvimirira yechitsuwa
Barbados yaimbove yeBritish, uye chitsuwa chakazvimiririra mu1966; izvi zvakaitika mushure mekutanga kugarwa nemaBritish muna 1627. Pamberi perusununguko rwayo, chitsuwa ichi chaive nyika yeBritish kusvikira kuzvitonga kwemukati kwawanikwa muna 1961. Nanhasi, kunyangwe hazvo chitsuwa ichi chakazvimiririra, Barbados ine hukama hwepedyo neBritish Monarch, iyo inomiririrwa naGavhuna Mukuru. Mambokadzi anoramba ari mukuru wenyika yeBarbados.
Unotenda kana kwete, Rihanna ane mavambo ekuzvininipisa pachitsuwa cheBarbados. Anobva kure kubva ipapo, parizvino ave muimbi ane mukurumbira, munyori wenziyo, dhizaina, mutambi, uye kumeso kuseri kwechiratidziro chechiratidzo Fenty Runako, imwe yeanonyanyo kuzivikanwa marangi epasi. Rihanna anowanzo dzokera kuchitsuwa ichi kune yakakurumbira Crop Over carnival mhemberero, uye iye anosimudzira chitsuwa chake pese paanopihwa mukana. "Riri", sekuzivikanwa kwaanoitwa nevateveri vake, akakudzwa nezita rekuti "Mumiriri Anoshamisa uye Plenipotentiary" yeBarbados munaGunyana 2018.
Nhoroondo yepirate yeCaribbean inokatyamadza, uye hazvisi zvese ingano yekunyepedzera yakagadzirirwa chinangwa chekuisa pamwechete bhaisikopo rinotengesa zvakanyanya. Mapiravha akambotonga makungwa munzvimbo ino, vachityisidzira ngarava munzvimbo iyi. Vaviri vanozivikanwa vapambi veBarbados vaive Sam Lord naStede Bonnet. Kusvika pakuenda kwevapambi, Sam Lord aive pakati pezvakanyanya kugadzirisika, sezvaakatora nzira dzake dzekuba kumahombekombe. Ishe vaisungirira mwenje mumiti yemikokonati kuti vanyonganise ngarava mukufunga kuti dzaienda kuguta guru. Vazhinji vaizopwanya ngarava dzavo pamatombo, uye mavhiri aifamba achironga hurongwa hwaIshe hwakatsauka.
Stede Bonnet kune rimwe divi, aive muchinda wepirate, uye mukuru pamudyandigere wemauto eBritish. Akatendeukira kudivi 'rerima' muna 1717, uye akatosvika pakutenga yake ngarava yepirate. Ngarava yake yaizivikanwa se "Revenge", uye akaifambisa kubva kuNew England Coast. Ari munzira akabata ndokupisa ngarava zhinji, ndokuzodzokera kuCaribbean. Iye akashamwaridzana neanozivikanwa pirate, Blackberry, uyo pane imwe nguva akatora matomu echikepe chake, icho chakazodzoserwa. Pakupedzisira, Bonnet yakatorwa, ndokuurayiwa nenzira yekurembera, muna 1718.
Nyika yehove dzinobhururuka
Hove dzinobhururuka dzinozivikanwa kubata muBarbados, nekudaro zvinongedzo kuchitsuwa uye hove dzinobhururuka, uye chikonzero nei iyi mhando yehove inowanikwa muchitsuwa chenyika chikafu, cou cou uye hove dzinobhururuka. Cou cou uye hove dzinobhururuka dzinoitwa nekupisa hove nezvinonhuwira zvemuno uye imwe mwaka, uye kuchimisikidza pamwe necou cou, iyo inogadzirwa nechibage uye okra. Kune zvimwe zvakawanda zvakakurumbira ndiro dzaunogona kuyedza uri muBarbados pazororo rako rese-rinosanganisira, iro raunogona kudzidza zvakawanda nezvaro mune redu Bharabhadhi chikafu blog!
Crop Over epic Caribbean carnival kupemberera, uye kutanga kwayo kune chekuita nekukohwiwa kwekupedzisira kweshuga kwemwaka. Izvi zvinoitika kunguva yekoloni, asi nhasi iri bato guru reBarbados, nevanhu vazhinji vanozivikanwa vanobhururuka kuenda kuchitsuwa kuti vave chikamu chechiitiko. Mabasa Ekurima Anotanga kutanga muna Chikumi uye nematanho kusvika Muvhuro wekutanga muna Nyamavhuvhu. Kuguma kwekuputika kwechiitiko cheCrop Over kunozivikanwa seThe Grand Kadooment (Kadooment Day). Pamusoro pe, masikati nehusiku mapato, panguva ino uchawana misika yezvigadzirwa iri kuitika, kuratidzira kwevana uye zvimwe. Kunyangwe ukasapfeka hembe, kusvetuka neCrop Over band, nemumigwagwa yeBridgetown, paKadooment Day, unenge uri muzororo rakazara kana ukaenda kuBarbados panguva ino.
Sir Garfield Sobers akaberekerwa muBarbados
Sir Garfield St. Auburn Sobers akaberekwa muna 1936 muSt. Michael, Barbados. Iye anozivikanwa seimwe yeanoshamisa epasirose epamoyo. Anotenderedza pamunda, Sobers akatamba kuchikwata chekiriketi cheWest Indies kubva panguva yaaive nemakore gumi nematanhatu. Pakati pezvakanaka zvaakaita kugona kuisa rekodhi yepasi rose muna 16 nekurova mazana matatu nemakumi matatu nematanhatu, pasina kurohwa. Icho chinyorwa chakazoputswa muna 1958, asi nanhasi Sobers anoramba ari National Hero muBarbados.
Vagari venzvimbo vanozvidaidza kuti "Bajans"
Bajans, sekuzivikanwa kwavo, vazere nehunhu, uye vazhinji vanonyanya kuda nyika. Kunyange iwe ungangoda kuvadaidza kuti Barbadian, vazhinji vanokurumidza kugadzirisa uye kukuzivisa iwe kuti ivo vari pachokwadi, "Bajan". Kunyangwe mazwi ese ari maviri ari echokwadi, iyo nyika "Bajan" neimwe nzira inoita kunge iri nani kugona kuputira hunhu hwevanhu vakapusa veichi chitsuwa. Paunenge uri muBarbados pazororo rako rese-rinosanganisira, iwe unonzwa zvakare vanhu vazhinji vachinongedzera kuchitsuwa ichi nemadunhurirwa, "Bim"!
Dzimba dzeChattel idiki, dzinotakurika dzimba dzemapuranga, dzakasungirirwa padyo nenhaka yechitsuwa. Mavambo avo anodzokera kumazuva ekudyarwa, apo dzimba dzinofambiswa dzaizotengwa, idzo dzaigona kutamiswa kubva kune imwe chivakwa kuenda kune imwe. Dzimba dzeChattel dzinozivikanwa nevaridzi vedzimba vanogona kunge vasiri ivo varidzi venzvimbo yavanogara. Idzi dzimba dzinowanzo kuvakwa pamabhuru, izvo zvinoita kuti zvive nyore kufamba, pese pazvinenge zvakakodzera. Makore gare gare, idzi mhando dzedzimba dzinoramba dzichive chinhu chakakurumbira mune mamwe matunhu eBarbados, mune akajeka uye akasarudzika magadzirirwo.
Tsoko hadziwanzo kuwanikwa kune mazhinji ezvitsuwa zvidiki zveCaribbean, asi kwete muBarbados. Iyo Green Monkey inowanzoonekwa pachitsuwa ichi, uye dzimwe nguva kunyange inoputika muminda yevanhu. Vemunharaunda vanotenda kuti Green Monkey yakabva kuSenegal neGambia kuWest Africa makore mazana matatu apfuura. Nekufamba kwenguva, tsoko dzakagadzira hunhu hwakasiyana, zvichienzaniswa nevekuWest Africa. Iwe une mukana mukuru wekusangana neGreen Monkey muBarbados kana iwe ukashanyira nzvimbo dzakaita seSt. John, St. Joseph, St. Andrew kana St. Thomas. Idzo tsoko dzakashata uye dzinotamba, saka usashamisika kana iwe ukaona imwe ichifamba mune yako yose-inosanganisira resort!
Maonero akanaka kubva kunzvimbo dzekutarisa
Bharabhasi haizivikanwe kuva chitsuwa chine makomo, asi izvo hazvireve kuti haugone kuwana zvinoshamisa maonero kubva kune mamwe maonero nzvimbo. Mount Hillaby muSt Andrew semuenzaniso, nzvimbo yepamusoro pachitsuwa ichi, iri 1,115 tsoka pamusoro pegungwa. Maonero kubva kumusoro akatanhamara, kusanganisira pikicha inokodzera ese-anosanganisira ezororo maonero eScotland District.
Garrison Savannah ane mweya weBritish nezvazvo, uye ndizvo chaizvo - zvakadzika midzi munzvimbo yeBarbadadian kubva panguva yekoloni, 1845 kunyatso. Nhoroondo inoratidza kuti mauto akambomiswa munzvimbo inowanikwa Garrison Savannah muBridgetown, ndosaka zita racho. Mukupera kwaKukadzi naKurume kutanga kwaKurume, Garrison Savannah anotamba mutambo weBarbados Gold Cup, mujaho wemabhiza wakazara uyo wanga uri pakarenda yezviitiko kubvira 1982. Kunze kweizvozvo, kana iwe uchifarira mutambo wemabhiza, uri kuenda panguva ipi neipi yemwaka mitatu; Ndira-Kubvumbi, Chivabvu-Gunyana, kana Mbudzi-Zvita. Izvo hazviwanzo kudhura kutarisa mijaho yemabhiza, nematikiti ezviitiko zvakaderera se10 Barbadian Madhora.
Mongeese anowanzo fananidzwa nemaweasel, kana stoats. Iwe unogona kuona ava madhiri madiki vachimhanya mhanya nemugwagwa, kunyanya kana uchifamba mumugwagwa wakakomberedzwa negreenery mumaruwa eBarbados. Idzo idiki, mhuka dzine mvere, idzo dzinowanzo shava / pfumbu muvara, uye dzakaunzwa kuBarbados kubva kuIndia nekuda kwechikonzero chakati: kuuraya makonzo. Panguva iyoyo, huwandu hwemakonzo hwaiwedzera hwaikanganisa maindasitiri enzimbe, asi chirongwa ichi chakadzokera shure nekuziva kuti makonzo ari manheru, nepo Mongoose asiri. Chero nzira, kuchine akawanda mongeese pachitsuwa.
Bharabhasi ine zvese uyezve nevamwe…
Kunyangwe iwe urikutsvaga kuve nehoridhe kwaunogona kunyudza iwe zvizere munhoroondo uye tsika yechitsuwa, chisingaperi-chekunze kwekunze kwekushanya, kana nguva inonakidza apo zvese zvaunoda kufunga nezvazvo ndizvo zvaunowana iwe wako inotevera cocktail, iwe uchawana izvo zvese uye zvimwe muBarbados uye kunyanya panguva yese-inosanganisira zororo. Nezviitiko zvichawanikwa panguva yako yezororo, uchanyatsobva pachitsuwa ichi uine ruzivo rwakadzama pachikamu ichi chenyika, icho chinoramba chiri imwe yenzvimbo dzakanyanya kukosheswa zororo. Bhuka imwe ye Shangu dzese-dzinosanganisira nzvimbo dzekugara muBarbados, uye iwe uchave unovimbiswa nguva yakanaka!